पर्दामा दुई फिल्म, ईनिसियल भन्दा माथि उठ्ला त व्यापार ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
पर्दामा दुई फिल्म, ईनिसियल भन्दा माथि उठ्ला त व्यापार ?
फिल्मी फण्डा । आज शुक्रवारबाट नेपाली चलचित्र बजारको पर्दामा दुई फिल्म एक साथ लागिरहेको छ । दुबै फिल्म स्टार कास्ट र ब्राण्डले गर्दा चर्चामा नै रहेको छ । दुबै फिल्मले शुरुवाती दिनमा राम्रो ईनिसियल व्यापार गर्ने पक्का देखिन्छ तर ईनिसियल व्यापार भन्दा माथि फिल्मको व्यावार होला की नहोला, दुबै फिल्मलाई चूनौती रहनेछ ।
निखील उप्रेती प्रोडक्शनमा निर्माण भएको फिल्म रुद्र एक्शन फिल्म हो । निखील उप्रेतीका फ्यान र एक्शन चलचित्र मन पराउने दर्शकहरुको लागि यो फिल्म अब्बल हुन सक्छ । रामजी लामिछानेले निर्देशक गरेको फिल्म रुद्रमा निखीलको अलवा नव प्रवेशी जोडी विश्व शर्मा र सारा श्रीपाईलीको मूख्य भुमिका रहेको छ । फिल्मको बुधवार राजधानीमा प्रिमियर शो सम्पन्न भएको थियो । प्रिमियर शो हेरिसकेपटि चलचित्रकर्मीहरुले निखीलको एक्शनको तारिफ गरेका थिए । निखीलको स्टारडमले गर्दा पनिय सिंगल थिएटरमा यो फिल्मले ईनिसियल व्यापार गर्ने पक्का देखिन्छ ।
यस्तै नेपालको मुर्मा देखी म्यानमारको बर्मा सम्मको कथा समावेश भनिएको लभस्टोरी फिल्म प्रोम गीत २ लाई भने राम शरण पाठकले निर्देशन गरेका हुन् । प्रोमगीत २ लाई प्रमे गीतको रेकर्ड ब्रेक गर्न आफैमा चूनौती छ । प्रदिप खड्कासँग नव नायिका अश्लेशा ठकुरीलाई फिल्ममा प्रस्तुत गरिएको प्रेमगीतको ब्राण्ड जोडिएको कारण पनि यो फिल्मले शुरुवाती दिनमा ईनिसियल व्यापार गर्ने पक्का हुन्छ भने बाँकी व्यापारको लागि फिल्ममा निर्भर रहनेछ ।
शुक्रवार देखीनै तेश्रो हप्तामा प्रवेश गरेको फिल्म म यस्तो गीत गाउँछुले पनि राम्रो व्यापार गर्ने वितरकको भनाई छ । मल्टिप्लेक्समा समेत म यस्तो गीत गाउँछुको शो सुरक्षित रहेको छ । यसर्थ प तेश्रो हप्ता म यस्तो गीत गाउँछुले राम्रो व्यापार गर्ने निश्चित देखिन्छ ।